ANTOHOMADINIKA Tratra i Benaivo sy i Safidy, mpanendaka ikoizana
Fakana an-keriny Tranga 14 no niseho, olona 14 no nosamborina
Mbola mahazo vahana hatrany ny fakana an-keriny eto amintsika. Anisan’ny tena nalazabe ohatra tamin’ny faran’ny herinandro teo ny fisiana lehilahy iray nisy naka an-keriny tao Ambatondrazaka ary nidina tamina trano tsy fantatra nandritra ny dimy alina.
Famonoana CB sy Ben’ny tanàna Olona 13 no voapaingotra
Nanova paikady nentina nikarohana ireo atidoha nikotrika tamin’ny fitifirana ny kaomandin’ny zandary tao Befandriana avaratra sy ny Ben’ny tanànan’i Belanona, ireo zandary tany an-toerana,
Sekolin’ny zandarimaria Ambositra Misitraka fanohanana avy amin’ny PNUD
Trano fatoriana miisa roa sy “sale d’eau” miisa roa no notokanana tao amin’ny Sekoly ambonin’ny zandarimariam-pirenena na ny EGNA any Ambositra ny zoma 14 aogositra lasa teo,
Asan-dahalo ao Betroka Niova ho fakana takalon’aina
Mihena ny asa-dahalo any Betroka amin’izao fotoana, hoy ny filohan’ny fikambanana Andrimaso, Ajad Ridji Razafindrazanaka, saingy ny halatra olona kosa no tena mampatahotra ny mponina.
Tsy fandriampahalemana ao Ikongo « Fandraisana andraikitry ny fiarahamonina ihany no vahaolana ! »
Ny fiakarana sy fikirakiran’ny olona ny Lavanilina no tena itako miteraka tsy fandriampahalemana ao amin’ny distrikan’Ikongo, hoy ny depiote voafidy tao an-toerana sady filoha lefitra misahana an’i Fianarantsoa eo anivon’ny antenimieram-pirenena, Brunel Razafitsiandraofa.
Dalle Itaosy Efa tongan’ny mpangarom-paosy, vehivavy iray no lasibatra
Vehivavy iray indray omaly maraina tokony ho tamin’ny 09 ora no ankon’ny ranomaso teny amin’ny Dalle Itaosy,
Depioten’i Soalala Said Zakaniaina Lehilahy roa nitondra basy no saika hamono azy
Vao nivoaka ny haino aman-jery tsy miankina Viva tao Mahajanga ny Depiote Said Zakaniaina Mahafaly Joseph voafidy tao Soalala ny alahady lasa teo no nisy jiolahy roa nanaraka tsy nisaron-tava ary nitam-basy nikasa hifofo ny ainy.
Tratran’ny polisy avy ao amin’ny CSP4, ny alarobia 15 mey lasa teo tokony ho tamin’ny 5 ora hariva, teny Antohomadinika i Benaivo sy i Safidy anisan’ireo mpanendaka tena hikoizan’ny mponina eny an-toerana.
Araka ny fantatra, mpanendaka efa tratra saingy tafatsoaka teo am-pelatanan’ny mpitandro ny filaminana i Safidy sady efa nigadra. Tsy afa-nikofoka intsony izy tamin’ity indray mitoraka ity taorian’ny angom-baovao azon’ny polisy. Nahare tamin’ireo tsara sitrapo ireto farany fa mihaodihaody mitady haza eny amin’ny toby fiantsonan’ny taksibrosy mihazo an’Ambatondrazaka eny Antohomadinika izy roalahy ka nanao fisafoana moramora ny mpitandro ny filaminana. Tena tratra ambodiomby saika hanao ny asa ratsiny mihitsy izy ireo ka tsy afa-nihetsika intsony. Anisan’ny voasokajy ao anatin’ny faritra mena ny tanànan’Antohomadinika ankehitriny ka ilana fitandremana fatratra. Hatolotra ny fampanoavana tsy ho ela izy roalahy.